Niagara Falls Kuratidzwa kubva kuNew York | Absolut Kufamba
Niagara Falls Tour kubva kuNew York
Absolut Kufamba | | New York
New York City, inozivikanwa seguta risingatomborara, ndeimwe yenzvimbo zhinji dzevashanyi dzekurota. Kufamba iri guta hombe neyakareruka zvinodikanwa kuti upedze rinenge svondo ipapo, uchitsvaga nguva yekuona nzvimbo dzepedyo dzekufarira, senge iyo inozivikanwa Niagara Falls.
Zvirongwa kana zvasvika pakuona New York hazviperi. Kubva pakutora kushanya kunodikanwa kuEmpire State Building, nemaonero eguta kubva kumusoro, kusvika pakuona chiratidziro chemimhanzi paBroadway, kufamba-famba nepakati peiyo Times Square kana kuona iyo Bridge Bridge. Muiyo Big Apple unogona kunakirwa, ehe, zvishoma zvisikwa nekuda kwepuru nyoro yemapapu iyo iri Central Park. Zvisinei, vanoda nzvimbo dzakasvibirira vanogona kupotsa hukuru hwenzvimbo dzepanyama.
Ndokusaka tichikupangira iwe a Inoshamisa uye isingakanganwiki rwendo rweNiagara Falls kubva kuNew York.
1 Ungasvika sei kuNiagara Falls
2 Zvaunofanira kuona paNiagara Falls tour
3 Nei zvakakodzera
Ungasvika sei kuNiagara Falls
Niagara Falls chishamiso chaicho, saka usarasikirwa nemukana wekusvika pavari. Kuti zvive nyore, iwe unogona kushanyira kushanya muSpanish ku Hellotickets webhusaiti, zvekuti isu tinongofanirwa kunetsekana nekunakidzwa nenzvimbo.
Mapopoma ari pamakiromita mazana matanhatu nemakumi matanhatu, padyo neguta reToronto nemuganhu weCanada. Vanogona kusvikwa nemotokari iyo inotora anenge maawa matanhatu, nebhazi, nerwendo rweanenge maawa gumi, kana nendege, nerwendo rwemaawa angangoita maviri. Nerwendo rwakatungamirwa iwe uchasvika pakutanga, mumaawa manomwe kana masere, pamusoro pekuwedzera kunyaradzwa kwekusanetseka nezve chero chinhu uye kuwedzerwa kwekuziva iyo nhoroondo uye ese mapoinzi ekufarira pasina kuronga zvese zvisati zvaitika.
Zvaunofanira kuona paNiagara Falls tour
Parwendo rwekuenda kuNiagara Falls kubva kuNew York ivo vachatiratidza zvese zviripo zvekuona.
Iyo Niagara Falls State Park inotipa inonakidza maonero ekuti tione mapopoma matatu, aine maonero akakwana ekutora mifananidzo. Hellotickets zvakare inosanganisira iyo yekushanya inozivikanwa seMaid weMist, nerwendo rwechikepe padyo nemapopoma anobva kunzvimbo yeUS.
Parwendo rwekudonha iwe unogona kutora dzimwe nzira netsoka kuburikidza neNiagara Gorge, nemigwagwa ine hurefu hwakasiyana uye inobvumidza kupinda kumatunhu akakomberedza.
Imwe pfungwa yekushanyira parwendo rweNiagara Falls iGoat Island, chitsuwa chiri pakati pemapopoma icho chine chifananidzo chemugadziri Nikola Tesla uye maonero eTerrapin Point.
Rwendo rwakaita serwe rwunotiendesa kuNew York rwakareba uye runoda kurongeka kwakawanda. Kuhaya rwendo rwekuenda kuNiagara Falls kubva kuNew York izano rakanaka, nekuti rwendo rwakareba uye runogona kunetsa kana rikaitwa nemotokari kana bhazi pasina nhungamiro yeavo vanoziva nzvimbo yacho.
Iwo mafambiro akarongwa neHelloticket anotipa mukana wekusarudza mapakeji akasiyana nekushanya kwezuva rimwe kana akati wandei, tichiziva nzvimbo huru yemapopoma asiwo maguta akadai sePhiladelphia kana Toronto. Mune aya mapakeji, kushanya kunoitwa kunzvimbo dzese dzekufarira mukudonha, kubva Goat Island kuenda kuNiagara Gorge. Hatisi kuzopotsa chero chiitiko kana nzvimbo uye isu tichakwanisa kuona iyi inoshamisa nzvimbo zvakadzama.
Zvese kune vanoda zvisikwa uye zveavo vanofarira kugadzira mifananidzo yemapikicha munzvimbo dzerunako rwakanyanya, rwendo urwu rwakakosha rwunofanirwa kuwedzerwa parunenge uchienda kuNew York.
Neruendo urwu rwakatungamirwa isu tichafanira chete kusaina, sarudza iyo ratidziro nezvose zvayinoita uye tipe nguva yedu yese yekunakidzwa munzvimbo ino inoshamisa. Chichava chiitiko chisingakanganwiki!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Niagara Falls Tour kubva kuNew York